Katz on Dogs: Jon Katz : Kungani ngifuna inja
Igcine ukubuyekezwa: May. 26 2018 | 9 imiz ufunde
It umbuzo abazoba inja abanikazi kufanele ucele kuqala, mhlawumbe ebaluleke kakhulu ekuphileni umuntu anabo a inja:
Izinqumo esibucayi kakhulu ezimpilweni zethu izinja bavame ngaphambi siletha ekhaya elilodwa. Ukuzuza inja in America bande
simple. Ungakwazi ukudoba imdambi ngamanetha online, thola a umfuyi, noma ukuthatha omunye puppies ezinye kid Unikela ngaphandle esitolo (Bengingeke ukweluleka it). You
kungenzeka uhlangabezana edukile ngesikhathi ukuhamba noma ukushayela. Abanye abantu bafune izinja ngezizathu rock-hard practical: nokuvikeleka, hunting, therapy, search nokutakula. Kodwa iningi lethu, bathi zokusebenza kwengqondo kanye behaviorists, babe izisusa ezingokomzwelo nezingokwengqondo more xaka.
KUNGANI NGIFUNA A DOG?
The abantu enkingeni ziye okade omunye nomunye, the more iphendukela izinja (nezinye ezifuywayo) ukugcwalisa ezinye izikhala. Thina babonakala kudingeka nokuthandwa ngezindlela zilula, pure, futhi kungathenjelwa.
Contemporary America, ngezindlela eziningi, a wahlukana, umphakathi ZIPHUME. Imindeni yethu enwetshiwe baye bathuthela away; sivame abazi omakhelwane bethu; abaningi bethu imbobo ebusuku, likhiphe ngesinye uhlobo kwesikrini noma omunye. Isehlukaniso kuyinto evamile. Umsebenzi isibe engazinzile, engaqinisekile kwabaningi, ngokuvamile ezingemnandi. Abantu abaningi babonakala bakuthola kulula siphile futhi uxhumana nezinja kuka omunye nomunye, futhi kanjalo izibopho phakathi kwabantu izinja likhula luqine.
Nokho lokhu nentuthuko ebuhlotsheni lezi zinhlobo ezimbili ungomunye emaceleni. Izinja abaningi bakhonza kahle abantu’ okunamathiselwe Ngokujulisa, kodwa hhayi izinja ungakwazi ukukhetha okufanayo. Kuba isidingo somuntu ukuthi iye yabangela imilando omkhulu Canine love affair.
Abantu baye banquma ukuba alethe izinja singene maphakathi izimpilo zabo. Ngokuba bonke Fussing ngamalungelo animal, izinja babe none. Abazi uthole ukwenza izinqumo umthengi. Zingakwazi kuncike kithi konke abakudingayo ukuze basinde. Abakwazi ukukhuluma emuva; abasenakuphumula anothi mayelana izindawo zabo noma ikusasa.
Nakuba izinja ziye zasiza futhi wasebenza abantu izinkulungwane zeminyaka, kungcono kuphela emashumini eminyaka amuva ukuthi Ngiye kube yinto ngaphandle (mhlawumbe ngaphezu) izilwane. Pet-ukugcinwa yayidumile phakathi abacebile nabanamandla wenkathi ephakathi, kuphawula ethicist animal James Serpell encwadini Animals and Human Society: Ukushintsha Perspectives, kodwa akazange thola nokuhlonipha okwandile kwaze ngasekupheleni kwekhulu nesikhombisa, isikhathi nomdlandla esikhulayo isayensi nomlando yemvelo nokukhathalela kwandisa izilwane’ inhlalakahle. Kusuka lapho, okunamathiselwe yethu izinja uye waqinisa ngokuphawulekayo. Thina bantu azikaze closer kwezinhlobo. Sichitha amashumi ezigidi zezigidi zamarandi ukunakekelwa yabo, ukusuthisa, futhi yokuzijabulisa; ibanike amagama human; khuluma kubo ngokuthi uma ukuqonda kwethu; zikholelwa siyazi ukuthi basakhuluma us in ukubuya.
Lokhu babekwenza ngokuvamile thandela izinja in izidingo zethu futhi ufuna. Kuyinto evamile manje, nakuba kwakuyoba ezishaqisayo ngisho isizukulwane edlule, ukuzwa abantu bethi ngaphandle axolise noma ukuphoxeka ukuthi ngiyazithanda izinja zabo ngaphezu bethanda abantu abaningi, ukuthi ubone izinja zabo memba yabo, ukuthi isifuba izinkinga zabo obuseduze kakhulu futhi izimfihlo izinja, abathintana abaqotho kanye nokuqonda kuka abazali, bomshado, abathandi, noma abangane. Ukuchitha izinsuku ezimbalwa ehhovisi udokotela wezilwane njengengxenye yocwaningo kwami ​​incwadi, Ngamangala ukuzwa omunye wesifazane ngemva kwenye Intshisekelo, “Bheka, Doctor, Angikwazi ukuphila ngaphandle umyeni wami, kodwa uthola ukusindisa lesi inja!” Nokho vets ungitshele bezwa ngaso sonke isikhathi.
Futhi hhayi nje abesifazane. Ucwaningo lubonisa ukuthi abesifazane nesimilo ngiyazithanda izinja ingxenye ngoba kubonakala supportive kodwa complex ngokomzwelo, bakwazi ukuqonda zabanikazi in a nakuba ngendlela ejulile eNgenamazwi. Khonamanjalo, amadoda ngiyazithanda izinja ngoba kukhona oshomi ephelele, happy ukuya ezindaweni ezithile noma ukwenza izinto, kodwa abakwazi ukubamba noma ukufuna izingxoxo. Zithanda noma zingathandi, izinja zethu’ upbringings sibonakalise eyethu. Thina athambekele ekuphatheni izinja zethu ngendlela saphathwa, noma indlela siyakwazi 'd yaba. Noma kunjalo, pasts zethu siqu ogxile balolonge izimo zethu zengqondo mayelana izinja kanye nezindlela siqeqeshe futhi ukuxhumana nabo.
Lokhu ngokuvamile kuba inqubo equlekile. Bambalwa abanikazi ukuletha self-awareness kakhulu ebudlelwaneni babo Canine noma uzindle imindeni yabo siqu lapho ukuthethisa izinja zabo ukuza, noma COO uwabheka uma baqonda. Omunye umhlengikazi esikoleni Ngiyazi yambamba inja yakhe by ezindlebeni njalo ebusuku lapho efika ekhaya, ukuthetha, “Unyangithanda? Ingabe I Mommy yakho sweet?” Wayezibuza ukuthi kungani inja ezama ukubaleka ngesikhathi sokwelula izinyawo.
Ngakho izisusa ukuthola inja ibaluleke, uma ukhathazekile ngenhlalakahle yayo futhi ufuna ubuhlobo obuhle. Ingabe impendulo yakho yombuzo othi kungani-a-inja ukuthi kulula ukuba ufune abangane kusuka isilwane kubantu kunokuba kumuntu? Ingabe ufuna inja ngenxa imiyalezo evela subliminal TV namabhayisikobho? Ingabe more besondele asindise izidalwa kunokuba ukuqeqeshwa kanye abaphila nabo?
Ingabe siqeqesha siphandle izigwegwe ngezindlela, cela amazinga ukulalela kanye nokuphelela zafuna kithi, agxeke nabo amazwi amazwi sezwa? Ingabe thina okunye bakulingisa ngokoqobo amadrama umndeni elidala, uzama ukuphulukisa usizi? Singakwazi yini ongasho eqinisile ukuthi thina noma omunye umuntu emndenini wethu uzimisele ukuthatha umthwalo ngokomzwelo for a inja, onothando nje kuphela kodwa ukuqeqesha nokunakekela ngoba?
Owesifazane okuthiwa uSusan wangitshela wayefuna a inja ngoba wazizwa olungavikelekile a enamatshana, ezingomakhelwane aswele Elizabeth, E-New Jersey. Ngakho eqala i mastiff English ezinkulukazi ukuze umninindawo ngokushesha kwamenza amnike away, ke umalusi German okuthiwa Thunder. Akusho ngempumelelo ukuvikela inja indlu, ukushaja isicabha izihambi uze. Kodwa kusukela Susan, osebenza wokuba umbhidisi New Jersey Transit, kuvuma yena nomqeqeshi abampofu nandaba ukusebenza kanye nenja, analo Ukukhiya Thunder egumbini lapho abangane noma izihlobo vakashela. Yena 's eze ekhaya ukuthola izingcezu ezingenakubalwa mail Shredded; inja Kuyaqondakala ubona ezimvilophini oluzayo slot umnyango njengoba siyingozi. Yena 's futhi kwadingeka ukuba ithathe isikhundla iminyango emibi amafasitela.
By manje, Thunder ukala ayisishiyagalolunye amakhilogremu bese idonsa Susan wonke eceleni komgwaqo lapho yena simyisa. Omakhelwane nezingane zabo bethuthumela ngenxa kuye, nakuba Akakaze empeleni yenhlwathi noma yokulinyazwa ubani. Inja akubonakali nolaka kangaka njengoba kanembeza; yena owenza umsebenzi eqashwa ukwenza, isisulu ukusebenza kwakhe siqu. Kodwa Susan, uthi uthanda Thunder, kuvuma ukuthi abakaze ngempela inja ngenxa yayo siqu. Cishe kwakufanele kuthathwe inkambo ukuzivikela noma ngokuthi inkampani yonogada-alarm esikhundleni. “Kungaba ashibhile ngokuhamba kwesikhathi, futhi lula.”
Ukuqonda izizathu sifuna inja central nangokukhetha ones sokunene, ukuziqeqesha ngokufanele, abaphila nabo ngenjabulo. The more siyaqonda ngathi, ukukhetha okungcono thina cishe siyokwenza kokubili zinhlobo.
Uma ucabanga ngakho, wazi inala ntu bakhononda ngokuthi izinja zabo abakhuthele kakhulu noma sedentary too, nesithakazelo kakhulu nokujaha izingwejeje noma ukuphazamiseka kakhulu ukuza lapho ebizwa, too zokuzivikela endlini noma kunjalo engayethusi Zazisho ukusiza bafeze izinto eziyigugu. Nakuba inja ngokuvamile uthola icala, njalo njengoba umnikazi wenza ukukhetha ngeshwa noma ukugula-kubhekwe. Ngenxa yalokho, inja ucindezelwa ukuba into ngaphandle kuyini, kanti abantu babe matasa. With a ukucabanga kancane futhi ucwaningo, izimpilo izinja nabantu babo kungaba lula futhi waneliseke ngokwengeziwe. Kodwa lowo owenza zidinga ezinye ukuqonda kwengqondo komuntu siqu kanye nemizwelo, abanye bacabanga mayelana sikuphi ezimpilweni zethu siqu futhi kanjani izinja zethu ngamukeleka. Jim, umzingeli ohlala eduze kwami ​​enyakatho yeNew York, egcina beagles ezintathu yenja enkulu 360 days ngonyaka. Bathi ziyaphuma amahora ambalwa ekuseni ngakolunye izinsuku ezinhlanu ukulandelela game. Bachitha isikhathi esiningi ukulinda, kodwa lapho kufika isikhathi sabo, Base ukudubula of the yenja futhi ehlathini. “Ziyakwazi izinja ezinkulu,” Jim uthi, ongazange ngisho okuthiwa kubo.
Ingabe uthanda kokuba kubo? Ngambuza once. “Lapho benza imisebenzi yabo I do,” Wasabela yakhe. Ngizizwa ibuyisele sorry for the dogs lapho I drive by, ikakhulukazi uma I cabanga izinja yami’ izimpilo etotoswayo, kodwa nezinja Jim sika, ngenkathi siphelela elikhulu, musa babonakala bayazi beswela. Akuzona zonke izinja bangakhokhi ngaleyo ndlela. Kodwa beagles Jim BakaJehova babonisa nezimo athusayo of dogs. Ubathola khona ukuzingela, period. UJim unenkosikazi nezingane ezine kuya lowo ezizinikele, futhi kusuke ematasa yakhe eqinile yezokwakha; yena akadingi izinja ukuba umdlalo wakhe noma kumngane wakhe. Once a day, yena iphume ukuba indlu yenja nge ibhakede inyama izinsalela tosses okuqukethwe singene yenja. At Christmas, wenezela ibhakede amabhisikidi. Bathola yonke isibhamu zabo, futhi bheka a udokotela wezilwane uma uqamba abagulayo. The beagles azikaze ngaphakathi ekhaya lakhe. Yena ukhuluma kubo ngokuqhosha futhi basazikhumbula, kodwa uku amathuluzi, like a sokuprakthiza noma isibhamu esisha, Abantu hhayi kancane, ngisho nezilwane abazifuyile ngempela ngomqondo wesimanje. Kodwa izinja zibonakala kokuqukethwe kanye unempilo. Jim owazi ngokuqondile ukuthi kungani ufuna kubo. Bayaqonda imithetho elula futhi, ngoba izinja bantule yokuqwashisa wobuntu kwesikhathi, abazi isikhathi eside kangakanani beya phakathi kwabathakathi. Kungase kungabi yindlela iningi lethu elingakwenza ufisa ukuba izinja, kodwa ukucaciseleka yakhe ngezinhlobo izinja ayifunayo futhi kungani kubonakala ukusebenza kahle ngoba bonke abaye baba nesandla.
Bese kukhona Andrea, nomdwebi ohlala epulazini, anamanci mahlanu engamahektare in Vermont. Ngenxa yezizathu ezihlukahlukene eziyinkimbinkimbi, kade ngililahlile ithemba ngesimo umqondo zabantu, umshado, umndeni; esikhundleni, wafuna out a group collie khulula. Yena, too, kuqondwe kahle ukuthi kungani wayefuna inja, futhi isibopho wakha yena kweyakhe ibonakala ukubenza bobabili bajabule.
“Angikaze ngiye nenhlanhla ubuhlobo, okungenani not yet,” Uthi. “Kodwa mina Whisper simdumise nomunye. I have fun kangaka naye, futhi lona uyangiduduza kakhulu nothando. Ngithemba ukuthi 's ibhuloho komunye ubuhlobo, kodwa uma kungenjalo, I uzoba kuzolunga.”
Akukhona kimi ukusho nangeqiniso angikwazi ngempela ukunquma ukuthi Andrea wamkhetha ngokuhlakanipha noma unempilo. Kodwa wacabanga isisusa sakhe, indlela inja angena ukuphila kwakhe, futhi wenza isinqumo kubhekwe.
“Ngoba kid yami Kuye becela eyodwa” kuba, ngokwesinye isandla, ngokuvamile isizathu umsolwa ukuthola isilwane. Kuyinto a zenqaba ovamile, kodwa nezinja wathenga njengoba Christmas lezimanga ngokufuna izingane ngokuvamile babe nesikhathi esinzima of it. Izithembiso get ezenziwe futhi ukhohliwe; isithakazelo iziqongo elisha, ke sekuncipha.
Not njalo. Umakhelwane oneminyaka engu-nambili ubudala wami wacela Retriever golden ngonyaka odlule for Christmas and abazali bakhe bavumelana, ngombandela wokuthi Jeremy baqikelele ngoba. Mhlawumbe baba wayeqiniseka ukuthi empeleni kakade ngoba bengitawu wafakazela ukuzinikela kwakhe ukudla inhlanzi yakhe futhi bahlanze Hamster amakheji.
Kunoma ikuphi, Jeremy enza banakekele Clancy. Yena uhamba naye ngaphambi nangemva kwesikole, feeds naye, Upela naye, simyisa ukuqeqeshwa emakilasini njalo ngoMgqibelo. Njalo uma ngibuya esikoleni, Jeremy and Clancy aqeqeshe ndawonye. Inja zafunda ukusiza lapho ebizwa, ukuhlala, uhlale, uyolala umyalo. Abantu ezindaweni zasemakhaya ujwayelene 4-H izinhlelo bayazi unempilo enhle kangakanani kungaba izingane ukuba baqikelele izilwane. Abantu ingane- futhi inja-há namadlelo lapho ukubusa ngokuvamile ibonakala, ezincane egcekeni, sikhulu inja wazi kanjani engavamile kuba. For Jeremy, ukuthola inja kubonakala like a into positive; waqhubeka izwi lakhe, noma mhlawumbe abazali bakhe bathatha isinyathelo okungavamile sokugcizelela ukuthi uyigcine. Noma kunjalo, Engihlangabezane nazo ambalwa kids onjengaye. Abazali, qaphela: somebody emkhayeni has ukuthatha umthwalo wemfanelo oyinhloko wokuzama inja, futhi uma izingane do not, Umama noma ubaba kufanele angenele.
Abazali bavame ukunikeza izingane zabo izinto abacabanga ukuthi kuhle kubo omakhalekhukhwini, amakhompyutha, izinja ngaphandle umcabango okuningi mayelana nendlela lezi zinto izosetshenziselwa noma aphathwe emva ukuthenga.
Ngakho kungani ufuna inja?
Uma impendulo, ingxenye, kubangelwa umlando ngokomzwelo eziyinkimbinkimbi (njengoba ngokuqinisekile icala nami), uqiniseke ukuqonda futhi ucabange nge nje ukuthi kuyini nicela isilwane. Naphezu mkhuba of izinja anthropomorphizing, abaqondi ukuthi yini thina kabusha ukucabanga futhi akunakwenzeka baqonde ezicashile izindima ezingokomzwelo ngezinye izikhathi sibacela ukuba ugcwalise. Abakwazi ngisho baziphathe amiably by izincazelo zethu uma anginikhethanga kahle, esibonise, futhi baqeqeshwe. Njengoba amathemba ethu avame kakhulu abawasebenzisayo, siba badumala kalula noma ngithukuthele. Kukhona nobufakazi obuzwakalayo bokuthi sidala inkinga nezinja biters, abayihlafu-, Barkers, neurotics abadinga tricyclic. Lokhu kwenzeka ngokwengxenye ngenxa yokuthi abantu abaningi kangaka uthole izinja ezingafanele ngezikhathi esingafanele ngezizathu ezingafanele. Kukhona uphiko zokuziphatha ukuthatha a inja. Nakuba base behluleka ephakeme-level ukucabanga izinqubo, Ngokuqinisekile izinja nemizwelo. Bathi ukuzwa ubuhlungu nokulahlekelwa, ukwesaba nothando. Lokhu ubanike nezinye izilwane ezithile ukuma kokuziphatha phakathi kwabantu zikanembeza. Kungase ungawafaki elingana izingane, kodwa akusho kusenza sibe nesibopho ucabange indlela sibaphatha. Kodwa zonke inja akuwona wonke umuntu. I abalamukeli okhulayo, qhutshwa kwezombusazwe umbono wokuthi yonke inja ngokulinganayo iyakufanelekela khulula, ukuthi zonke izinja empeleni ngokufanayo nezimo zabo ukuba esishubile yethu, ephithizelayo, imvelo litigious human. Mina angitholi ukuthi kuyiqiniso. Izinja ferociously idiosyncratic, nelula ukushayelwa kuye zohlobo, zofuzo, udoti isipiliyoni, ukwelashwa, futhi imvelo. Abanye Dhhn nokuzola, siyakhuthazeka senhliziyo, futhi abanye abanobudlova, ezifuywa futhi baqeqeshwe ukuba ekuzingeleni noma fight. Bambalwa kithi abanezimo nokuqeqeshwa kumakhono noma isikhathi phendula bonke ukuziphatha. The choice okungalungile inja ingaqinisa a nightmare wena, umndeni wakho, nomphakathi wakho; eyiyona, a injabulo.
Ezinye izinja kudingeka ukusebenza, abanye hhayi; abanye ngeke ukucashela ukuduma kanti abanye ngeke ngisho ukuphawule; abanye abantu inzondo in izigqoko nabanye jaha emabhayisikili. Awukwazi njalo ukwazi la oddities kusengaphambili; Lesi yisizathu esinamandla nakakhulu ukuqhubeka ngokuqapha.
It ngokuvamile kwenzeka uma kancane lindela it, kodwa alilokothi libuhlungu ukwenza…
Nganquma ukulalela umndeni wami futhi uthole emuva laphaya. “Kukhona ukuphila ngemva…
Umfowethu Michael ehlala nami kuze umshado wakhe kwabuyela on track. “Ungenzi…